वीरगञ्जमा छात्रा माथि एसिड प्रहार - Maxon Khabar
Home / News / वीरगञ्जमा छात्रा माथि एसिड प्रहार
२०७६ भदौ २० वीरगञ्ज
वीरगञ्जमा स्कुले छात्रामाथि एसिड प्रहार भएको छ । रेशमकोठीस्थित त्रिभुवन हनुमान उच्च मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत वीरगञ्ज-१३ श्रीपुर निवासी रसुल अलीकी छोरी १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भएको हो ।
उनको अनुहार, हात र शरीरको केही भाग एसिडले जलेको छ । नारायणी अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार गरेर उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ र कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उनको उपचारमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी वीरगन्ज महानगरपालिकाका ३ छपकैयाकी १५ वर्षीया छात्रा मुस्कान खातुनको उपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेका छन् ।
एसिड पिलाउन प्रयास असफल भएपछि प्रहार !
सम्साद मियाँले सुरूमा मुस्कानलाई सुरुमा पानी भनेर एसिड पिलाउने प्रयास भएको खुलेको छ । तर मुस्कानले पिउन नमानेपछि उनीहरुले मुस्कानलाई एसिड प्रहार गरेका थिए ।
प्लाष्टिकको जगमा एसिड लिएर बसेका उनीहरुले मुस्कानलाई आउ पानी खाउ भनेका रहेछन्, तर उनले ‘मलाई पानी खानु छैन तपाईँको पानी तपाईँ नै खानुस्’ भनी हिँड्न लाग्दा उनी माथि एसिड प्रहार गरेर उनीहरु भागेका रहेछन्,’ मुस्कानका ठूलोबुवा भुलन मियाँले बताए ।
घटनापछि नारायणी अस्पतालमा मुस्कानसँग आफ्नो कुराकानी भएको र उनले यसो बताएको उनले सुनाए ।
घटनाबारे जानकारी पाएलगतै एसिड प्रहार गर्ने युवकको खोजी शुरु गरेको प्रहरीले घटनामा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।वीरगञ्ज-१३ श्रीपुर घर भएपनि खातुन अध्ययनका लागि वडा नं. ३ छपकैया स्थित मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन् ।